China Wholesale Ruva Tea Kanganwa-Me-Kwete Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinese zita: wu wang wo
Chirungu Zita: kanganwa-ini-kwete
ChiLatin Zita: Myosotis silvatica Ehrh. ex Hoffm.
Basa guru: Kuchenesa kupisa uye chepfu, kujekesa moyo nekuvandudza kuona, kupa yin uye kunatsiridza itsvo
Myosotis sylvatica chirimwa chisingaperi chejenasi Myosotis mu lithospermaceae. Mashizha awo ndeemamwe, zvakapetwa oblanceolate kana strip oblanceolate. Maruva ayo akasanganiswa bhuruu nemhete yeyero pistils pakati. Iyo inofarira Yang, inogona kutakura Yin, uye iri nyore kuiparadzira nekuzvidyara. Ruva iri diki uye rakanaka, mutambo wemavara unowirirana uye unobata maziso, kunyanya cymose zvishoma nezvishoma inowirirana nekuvhurwa kweruva, hafu iine uye hafu inoratidza, inoyevedza uye isingakanganwiki. Varume vechidiki nemhandara vanopa mumwe nemumwe usandikanganwe kuti nditaure manzwiro avo akadzika.
Kuchenesa kupisa uye chepfu, kubvisa moyo nekuvandudza kuona, kupa yin uye kunatsiridza itsvo.
Iyo inokodzera acne, furuncle, rakaomarara ganda, kusaona zvakanaka, kuputirwa, pfupi yero weti, nezvimwewo Uye inogona kuchenesa ganda, kuchengetwa kweganda uye runako.
1. Usakanganwa runako tii: usakanganwe chiyero chakaringana cheruva, 1 teaspoon green tii, huchi hushoma. Isa iyo usandikanganwe maruva uye girini tii mumukombe, gadzira nemvura inopisa, mira kwemaminitsi matatu, wozowedzera huchi mushure mekunge usandikanganwe ruva raviravira. Inogona kuchenesa ganda uye inokodzera acne uye mabara.
2. Usakanganwe Erhua tii: usakanganwe Erhua tii uye honeysuckle tii muiyo yakafanana, nyorova mumvura kana decoct mumvura, 1 dosi zuva nezuva. Inogona kubvisa kupisa uye chepfu, uye inokodzera vana vane kupisa kupisa.
3. Usakanganwa Xie Yei tii: usakanganwe ini maruva, pani Xie Yei imwe neimwe magiramu gumi, svinura chinwiwa, kana decoction, 1 dosi zuva nezuva. Inogona kubvisa kupisa uye kubvisa kuzvimbirwa. Iyo yakakodzera kupatirwa.
4. Usakanganwa rose tii: usandikanganwe ruva, ruva ruva yega yega 10 gramu, bubble chinwiwa, kana decoction, 1 dosi zuva nezuva. Iyo inokodzera dysmenorrhea uye dysmenorrhea.
5. Usakanganwe chrysanthemum tii: usakanganwe ruva rangu, chrysanthemum imwe neimwe magiramu gumi, inwa chinwiwa, kana decoction, 1 dosi zuva nezuva. Inogona kunyevenutsa chiropa uye kubvisa kure kupisa. Iyo inokodzera BP, dzungu, kusaona zvakanaka, nezvimwe.
6. Usakanganwe tii yemashizha emishenjere: usakanganwe ruva rangu, magiramu gumi eecizhuye rimwe nerimwe, nyorova mumvura, kana furaya mumvura, 1 dose zuva nezuva. Inogona kubvisa kupisa uye kubvisa marwadzo.
7. Usakanganwe lotus yembeu tii: usakanganwe ruva rangu, magiramu gumi embeu yelotus imwe neimwe, nyorova mumvura, kana furaya mumvura, 1 dose pazuva. Inogona kubvisa kupisa uye kubvisa kure kudiridza. Iyo inokodzera spermatorrhea, dreamland zvichingodaro.
anenge gumi g
Cheka kana maruva mazhinji akavhurika uye nekukura ruvara.
Iyo inokodzera nyowani yakatemwa ruva kana yakaoma ruva.
Pashure: Burdock Midzi Ruva Tea
Zvadaro: Hutano Hwakaomeswa Marigold Ruva Tea